Various Artists - ဆည်းဆာအလှ [2011 Album] 320Kbps ! - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps! Album High Quality Nကိုင်ရာ Rဇာနည် Various Artists စိုင်းလိတ် ကြိုးကြာ သအို နေနေ မောင်မောင်ဇော်လတ် Various Artists - ဆည်းဆာအလှ [2011 Album] 320Kbps !
Various Artists - ဆည်းဆာအလှ [2011 Album] 320Kbps !
9:51:00 AM 320 Kbps!, Album, High Quality, Nကိုင်ရာ, Rဇာနည်, Various Artists, စိုင်းလိတ်, ကြိုးကြာ, သအို, နေနေ, မောင်မောင်ဇော်လတ်,
1. ပြည့်စုံလွန်း - ဇော်ပိုင်
2. မင်းအတွက်ပဲ - ချစ်သုဝေ
3. သနပ်ခါး - R ဇာနည်
4. ဖူးစာရှင် - နေနေ
5. ညှို့နိုင်လွန်းတဲ့ ကျွန်မချစ်သူ - ချမ်းချမ်း
6. ယုံပါ - မောင်မောင်ဇော်လတ်
7. တိတ်တိတ် ကလေး - ကြိုးကြာ
8. ဝေးနေပေမဲ့ - သအို
9. တစ်သက်လုံးအတွက် - စိုင်းလိတ်
10. မဝေးတဲ့ချစ်ချင်း - N ကိုင်ရာ
Tags # 320 Kbps! # Album # High Quality # Nကိုင်ရာ # Rဇာနည် # Various Artists # စိုင်းလိတ် # ကြိုးကြာ # သအို # နေနေ # မောင်မောင်ဇော်လတ်
Labels: 320 Kbps!, Album, High Quality, Nကိုင်ရာ, Rဇာနည်, Various Artists, စိုင်းလိတ်, ကြိုးကြာ, သအို, နေနေ, မောင်မောင်ဇော်လတ်